Tuugnimada Iyo Kamaradaha (CCTV). W/Q: Cali Cabdi Coomay
(Hadhwanaagnews) Friday, January 11, 2019 07:59:25
wakhtigaba iskagamuu lumin ee markiiba hawgal lagu soo qabqabanayo ayuu bilaabay. Waxaana si fudud loo soo xidhxidhay dhammaantood
= Tuugtii Baabuurka Jabsatay:gaadhi ag-yaalay meherada ay ku rakiban yihiin karamadaha (CCTV) ayey koox dhallinyaro ciyaalo-xaafad ahi jabsadeen, markaasay kala baxeen Kombuyuutar dhal ah (Laptop) iyo alaabooyin kale oo dhexyaallay gaadhiga. Ninkii gaadhiga
lahaa ayaa mar dambe yimid oo arkay gaadhigiisii oo la jabsaday. Ninkii meherada gaadhigu horyaallay ayaa u yeedhay ninkii gaadhiga laga jabsaday, markaasuu gudaha meherada ka tusay muuqaalkii ay kamaraduhu duubeen iyo sidii falku u dhacay. Ka dibna waxa si gaar ah kamaradii looga soo qaaday qaybtii duubtay falku markuu dhacayey, markaasaa mid kasta sawirkiisii lagu daabacay waraaqo midab leh si muuqaalkooda si fiican loogu aqoonsado, waxaana loo gudbiyey booliska. Booliskiina wakhtigaba iskagamuu lumin ee markiiba hawgal lagu soo qabqabanayo ayuu bilaabay. Waxaana si fudud loo soo xidhxidhay dhammaantood, iyaga oo weliba mid kastaa xidhan yahay dharkii uu falka ku geystay.
= Gabadhii Gogol-dhaafka Samayn Jirtay:Nink ganacsade ah oo safarkiisu badan yahay ayaa ka shakiyey xaaskiisu inay gogol-dhaaf samayso intuu safarka ku maqan yahay. Dabadeed xaaskiisii ayuu dalxiis ugu saaray dalka Itoobiya, markaasuu niman farsamoyaqaanno ah u diray inay gurigiisa gebi ahaan tiiba ku xidhaan kamaradaha (CCTV) waxaanu ku adkeeyey in aanay xaaskiisu arkin kamarada oo ay qariyaan inta suurtagal ah. Gurigiina meel kasta ayaa lagaga rikabay. Dalxiiskii markii isaga iyo xaaskiisii soo dhamaysteen ayey gurigii ku soo noqdeen. Ninkii ayaa maalintii ku xigtay qorshaystay inuu safar ilaa Dubaay ah u baxo, waxaanu ku maqnaa muddo dhan 7 cisho. Wuu soo noqday markaasuu la baxay Memory Card kamarada ku jiray oo duubay muuqaalkii 7 cisho.